दुर्घटनामा छोरी र श्रीमती गुमाएका थिए डा. बाइडेनले, एउटा प्रवचनको लिन्छन् १ लाख डलर - Everest Dainik - News from Nepal
दुर्घटनामा छोरी र श्रीमती गुमाएका थिए डा. बाइडेनले, एउटा प्रवचनको लिन्छन् १ लाख डलर
७७ वर्षीय जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार । जीतभन्दा ६ सीट मात्रै टाढा ।
निर्वाचन जितेमा उनी अमेरिकाको सबैभन्दा बयोबृद्ध राष्ट्रपति हुनेछन् । अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ७४ वर्षका छन् ।
र, यी बयोबृद्ध ‘आसन्न राष्ट्रपति’ बाइडेनको जीवन भने ट्रम्पको जस्तो सहज छैन । जहाँ ट्रम्पले मस्तीपूर्वक जीवन बिताए, त्यहीँ बाइडेनको जीवनमा भने निकै उतारचढाव देखिन्छ ।
सन् १९४२ को नोभेम्बर २० मा एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका बाइडेनका बुवा कार व्यापारी थिए । तर सन् १९५० को दशकमा बाइडेन दश वर्षको छँदा उनीहरु शहर छोड्न बाध्य भए । उनीहरु केही समय मामाघर बसे ।
बाइडेनका बुवाले भन्थे रे– छोरा, यदि तिमी लड्यौ भने नि, अर्कोपल्ट तिमी उठन सिक्नेछौ ।
बाइडेनले डेलवेर र साइराकस विश्वविद्यालयमा कानुनको पढाई गरे । त्यतिबेला धनी बाउका छोराछोरीले मात्र कानुन पढन सक्छन् भन्ने मान्यता थियो । बाइडेनलाई कक्षामा कतिले हेप्थे रे । उनको नाम नै बाइडेनबाट ड्यास भनेर राखिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस भारतको फेरियो बोली, घोषणा नहुँदै बाइडेनलाई मोदीले दिए बधाई
तर अपमान सहेर पनि उनले पढाई भने जारी नै राखे । दुई विषयमा माष्टर गरे भने शिक्षा क्षेत्रमा पिएचडी गरे ।
गुमाए छोरी र श्रीमती
सन् १९७२ । बाइडेनको जीवनको दुखद वर्ष । उनकी श्रीमती नेइला र जेठी छोरी नाओमी अरु दुई छोरासँगै क्रिसमसको किनमेल गर्न गइरहेका थिए । तर कार दुर्घटना हुन पुग्यो । नेइला र नाओमीको निधन भयो, दुई छोरा भने बाँच्न सफल भए तर सिकिस्त घाइते ।
त्यसपछि उनका दुई छोराले बुवालाई राजनीतिमा साथ दिए । उनका छोरा ब्यू डेलावेयरको न्यायाधिवक्ता समेत बने । तर बाइडेनको जीवनमा दुख बाँकी नै थियो । सन् २०१५ मा क्यान्सरका कारण छोरा ब्यूको पनि निधन भयो । यही कारण उनले २०१६ मा राष्ट्रपति निर्वाचन लडन सकेनन् ।
जिलसँग दोश्रो बिहे, छोरा कुलतमा
सन् १९७७ मा एकजना शिक्षिका जिल ज्याकोबसँग बाइडेनको भेट भयो । केही वर्षको उठवसपछि उनीहरुले सन १९७७ मा बिहे गरे । जिलबाट उनका दुई छोरा हन्टर र माथि उल्लेख गरिएका ब्यू जन्मिए । सन् १९८१ मा उनको छोरी एस्ले जन्मिइन ।
यो बेलासम्म उनले पिएचडी गरेर विश्वविद्यालयमा पढाउन शुरु गरिसकेका थिए ।
तर उनका छोरा हन्टरको जीवन पनि सुखद हुन सकेन । अमेरिकी नेभी रिजर्भमा भर्ती भएपनि उनी त्यहाँ धेरै दिन टिक्न सकेनन् । तर लागु पदार्थको कुलतमा फसेका कारण उनलाई त्यहाँबाट निकालियो । त्यसपछि युक्रेनको ग्यास कम्पनीमा संलग्न हन्टर भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्दै ट्रम्पले निकै आलोचना समेत गरे । हन्टरमाथिको अनुसन्धानमा बाइडेनले हस्तक्षेप गरेको ट्रम्पको आरोप थियो ।
कुशल शिक्षक र लेखक
बाइडेनलाई शुरुका दिनमा भाषण गर्न आउँदैनथ्यो रे । तर कक्षामा भने उनी उत्कृष्ट शिक्षकका रुपमा गनिन्छन् । एजेन्सीहरुले उल्लेख गरे अनुसार, उनी विश्वविद्यालयमा एक घण्टा प्रवचन दिएको शुल्क मात्रै औसत एक लाख डलर लिन्छन् । सन् २०१९ को एउटा रेकर्डमा उल्लेख भए अनुसार, उनले न्यूनतम ४० हजार र अधिकतम १ लाख ९० हजारसम्म एकघण्टा प्रवचन दिए वापत लिएका छन् । तर उनको आर्थिक अवस्था भने तुलनात्मकरुपमा मध्यम मानिन्छ । सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा उनी र उनकी श्रीमतीले ३ लाख ४६ हजार कर तिरेबाट यसको पुष्टि हुन्छ । उनले वार्षिक १० लाख डलरसम्म कमाउने गर्दछन् ।
याे पनि पढ्नुस निर्णायक मानिएको फ्लोरिडा र लोआमो ट्रम्पको जीत
आइसक्रिम खान निकै मन पराउने बाइडेनले रक्सी र चुरोट भने खाँदैनन् । तर हप्तामा दुई दिन भने उनले विदा लिने गरेका छन् ।
बाइडेन २९ वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका थिए । उनी सन् १९७२ अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो सिनेट सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछिका दिनमा उनले पछाडि हेर्नु परेन । ओबामाकालमा उनी उप राष्ट्रपति बनेका थिए ।
बाइडेनले कानुन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तनलगायतका कतिपय विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् । उनका कैयन पुस्तक र खोजमूलक लेखहरु प्रकाशित छन् ।
ट्याग्स: Joe Biden, US Election